घर संयुक्त राज्य फुटबॉल स्टोरीहरू वेल्श फुटबल खेलाडीहरू इथान एम्पपadu बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ को जीवनी तथ्य
LB एक फुटबल जीनियस को पूर्ण कहानी प्रस्तुत गर्दछ जो उपनाम द्वारा सबैभन्दा परिचित छ "अर्को डेभीड लुइज“। हाम्रो ईथान एम्पाडू बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू तपाईंको बाल्यकालको समयदेखि आजको दिनसम्म तपाईंलाई उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खातामा ल्याउँदछ। विश्लेषणमा उसको प्रारम्भिक जीवन, पारिवारिक पृष्ठभूमि, प्रख्यात हुनु अघिको जीवन कहानी, प्रख्यात कथामा वृद्धि, सम्बन्ध र व्यक्तिगत जीवन आदि शामिल छ।
हो, सबैलाई भविष्यको लागि उसको सम्भावनाको बारेमा थाहा छ। यद्यपि केवल थोरैले ईथान एम्पाडुको जीवनी विचार गर्दछ जुन धेरै रोचक छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
इथान एम्पपadu बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य तथ्य- बाल्यकाल
सुरूवात गरेर, उनका पूरा नामहरू Ethan Kwame Colm Raymond Ampadu हुन्। इथान अमपाडूको जन्म १ September सेप्टेम्बर २००० मा उनका आमा बुबा श्रीमती र श्रीमती क्वामे आम्पाडू संयुक्त राज्यको एक्सेटरमा भएको थियो।
ईथान बहुसracial्ख्यक पारिवारिक पृष्ठभूमि हो। उनको आमा जसको नाम अज्ञात छ वेल्सका हो र उनका बुबा क्वामे घानाबाट जन्मिएका हुन्। एथन एक फुटबल परिवारमा जन्मेका थिए उनका बुबा क्वामे अंपाडू, एक पूर्व आयरिश फुटबलर जसले एक पटक शीर्ष अंग्रेजी क्लब आर्सेनलको लागि खेलेका थिए र पछि उनीहरूको युवा र यु १ team टीमका प्रशिक्षक भए। ओह हाँ !, तपाई भर्खरै पढ्नुहुन्छ, यो शस्त्रागार हो!
Ampadu का बुबालाई सेवानिवृत्तिसँग व्यवहार गर्न गाह्रो हुन सक्छ। निवृत्तिभरणमा पूर्व आर्सेनल स्टारले उनीहरूको छोरा ईथानको माध्यमबाट सपना बाँच्न निर्णय गरे।
माथि देखाए अनुसारै खुसी इथान अमपाडु लाडिसमिथ शिशु स्कुलमा पढेर हुर्के जहाँ उनले खेलको अवधिमा प्रतिस्पर्धी फुटबल खेल्न सुरु गरे। फुटबल गतिविधिहरूमा भाग लिनु पर्याप्त थिएन। इथान अमपाडुका अभिभावकहरू पनि आफ्ना छोराले अन्य स्कूल घटनाहरू गम्भीरतापूर्वक लिन चाहन्छन्। त्यस्तै एउटा स्कूल उनको ट्यूडर भोज कार्यक्रम थियो।
ईथानको मनपर्ने घटना मध्ये एक उनको थियो स्कूलको पशु दिवस समारोह जहाँ त्यो एक जनावर जस्तै एक लुगा, एक उल्लू मा ड्रेस हुनेछ। (DevonLive रिपोर्ट गर्नुहोस्)
उनको कम सहपाठीले थाहा पाए कि एक जना बालकलाई एक पटक उल्लेखित केटाले केही दिन चेलसी एफसी स्टार बन्न सक्थ्यो।
इथान एम्पपadu बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य तथ्य- प्रारम्भिक क्यारियर लाइफ
एथानको फुटबलको लागि उनको उत्कटताले उसलाई स्थानीय युवा टीमको रोस्टरमा दर्ता गरेको देख्यो, Stoke Hill १० को मुनिका जसले उनलाई आफ्नो शुरुआती क्यारियरको जग बसाल्नको लागि चरण दिए।
यो एउटा टोली हो जसका बुबाले उनीहरूको यु १18 टीम प्रशिक्षक आर्सेनल युवामा जानुभन्दा पहिले पठाउनुभएको थियो। एथेनले एक्स्टर शहरको लागि खेल्न शुरू गरे जब स्कूलमा छँदा उसको अभिभावकले निर्णय गरेको थियो। एथान र उनका आमा बुबा दुबै सहमत थिए कि उनले आफ्नो GCSEs प्राप्त नगरेसम्म शिक्षा जारी राख्नेछन्।
शिक्षा र फुटबल दुवैको संयोजनले उनीहरूको सीमित प्रस्तुतीकरण गरेको थियो। आत्म-विश्वास र दृष्टान्त जुन उनको हेर्ने शब्द बनेको छ यो लाभांश को रूप मा भुगतान को रूप मा एथन र उनको U11 टीमहरु को रूप मा रेकर्ड तोडना शुरू गर्यो।
इथान एम्पपadu बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य तथ्य- सडकको प्रसिद्धि
मैनचेस्टर यूनाइटेड हंट:
12 को उमेर मा, इतान ले मैनचेस्टर मा एक टूर्नामेंट मा भाग लिया। आश्चर्यचकित बच्चाले टूर्नामेंटमा सबैलाई प्रभाव पारेको छ जसमा पूर्व मैनचेस्टर युनाइटेड प्रबन्धक, सर एलेक्स फर्गुसन जसले उसको लागि साइन इन गर्न चाहन्थे। रातो शैतान। फर्गुसन उनको प्रभावशाली अम्पादुरा को अधिकांश भन्दा अधिक ऊर्ध्वाधर कूद छ, जसले उनको बिरुद्ध को बेहतर बनाउन को लागि अनुमति दि्छ।
दुर्भाग्यवश, यो उनको प्रस्थानको एक समयमा र एड् वुडवर्डले पछि क्लबको अधिग्रहणको कारणले युवाहरूलाई चासोमा हस्ताक्षर गर्ने बनाउँन थाल्छ।
१ 15 वर्षको उमेरमा डिसेम्बर २०१ towards, एथानको क्यारियर Exeter City सँग किकक-अफ।
यस चरणमा, उहाँ अझै एक्स्टेटर शहरको वरिष्ठ टीममा पदोन्नती हुनुभयो र अझै पनि फुटबलको साथ स्कूल जागीर गरिरहनु भएको छ।
इथान एम्पपadu बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य तथ्य- प्रसिद्धि उठाउनुहोस्
यो अगस्त २०१ August को 9th औं दिनमा थियो, एम्पाडुले क्लिफ बास्टिनले set set वर्षको रेकर्ड तोडेर इतिहास बनाउन सुरु गरे। उनी एक्स्टर शहरको सबैभन्दा कान्छो खेलाडी भए,उमेर 15 वर्ष 10 महिना र 26 दिन) एक लीग कप म्याचका लागि सुविधा। उनले खेलको लागि म्याचको उपाधि कमाए।
यो एक समय थियो जब वेल्ल U17 राष्ट्रिय टोली र पछि, एक वर्ष पछि (मई 2017) संग अन्तरराष्ट्रीय पहिचान भयो।
जुलाई 1 को 2017 मा ठीक तरिकाले, एम्पादुले लन्डन प्रिमियर लीग क्लब संग एक सम्झौता हस्ताक्षर गरे चेल्सी FC। यो निर्णय उनले लेखे पछि र माध्यमिक शिक्षा को आफ्नो सामान्य सर्टिफिकेट पास गरेGCSE).
चेल्सी एफसी रेकर्ड:
सेप्टेम्बर २०१ 20 को २० औं दिनमा, एम्पाडुले नटिंघम वनको बिरूद्ध ईएफएल कप तेस्रो राउन्ड खेलमा चेल्सीको लागि डेब्यू गरे। त्यसो गर्नाले उसलाई बनायो २००० को दशकमा जन्मिएको पहिलो खेलाडी क्लबको वरिष्ठ टीमको लागि खेल्न। बाक्लो, जुन तिनीहरू भन्नुहुन्छ इतिहास हो।
इथान एम्पपadu बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य तथ्य- सम्बन्ध जीवन
इथान अमपाडुको प्रेमिका को हो?
सत्य भनिएको छ। अम्द्रद हो जसले जसको रोमान्स सार्वजनिक आँखाको खोजी मात्र छोड्छ किनभने अहिलेको लागि कम्तीमा प्रेम प्रेम धेरै निजी छ।
इथान एम्पपadu बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य तथ्य- व्यक्तिगत जीवन
एथन एम्पाडुको व्यक्तिगत जीवनलाई चिन्नुले तपाईंलाई उसको पूरा तस्वीर प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। ऊ त्यस्तो व्यक्ति हो जो दृढ संकल्पित र निर्णायक हो र उसले आफ्नो गन्तव्यसम्म पुग्ने सम्म खोजी गर्ने छ।
एथेनले चेल्सीलाई माया गर्थे जब उनका बुवा आर्सेनलको यू १ U प्रबन्धक थिए। त्यतिखेर, उहाँ अक्सर १ Che वर्षको उमेरको रूपमा चेल्सीको स्ट्यामफोर्ड ब्रिज भ्रमण गर्नुहुन्छ। दृढ संकल्प र आत्म-विश्वास संग, ब्रिज मा खेल को Ampadu सपना वास्तविकतामा आयो।
एथन एम्पपadu अब सम्म उनको पुरानो साथीहरु संग पटक्कै छ, जो जान्दथे कि उनि प्रसिद्धि हासिल गर्न को संघर्ष कसरि गरे। उहाँ मानिसहरूलाई संलग्न राख्नुहुन्छ उहाँ नजिक हुनुहुन्छ।
Ethan Ampadu को LifeStyle:
इथान एम्पुएड कोही छ जसले अनौपचारिक जीवन शैलीको साथ। उनी आफ्नो विदेशी घरमा स्विमिंग पूल खेल्ने क्षेत्रमा आफूलाई लागि आला कारवाही गर्न सक्षम छन्।
इथान एम्पपadu बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य तथ्य- पारिवारिक जीवन
Ethan Ampadu एक नम्र पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट आउँदछ। Kwame Ampadu र उनकी प्यारी पत्नी गर्व छ कि उनी आफ्नो छोरा इथानबाट राम्रो पाउन सफल भए। आज, दुबै बुबा र छोरा सुन्दर खेलको आफ्नै क्षेत्रको आनन्द लिन्छन्।
उसको एथान एम्पाडूका बुबाको बारेमा अधिक:
पैट्रिक क्वामे आम्पाडुको जन्म २० डिसेम्बर १ 20 .० मा एक आयरिश आमा र घानाई बुबाको ब्रैडफोर्ड, युनाइटेड किंगडममा भएको थियो। पैट्रिक क्वामे इ born्ल्यान्डमा जन्मेको भए पनि आफ्नी आमाको कारण आफूलाई आइरिस मान्दछन्।
एम्पाडु क्लब आर्सेनल, स्वानसी सिटी, लेटन ओरिएन्ट र एक्सेटर शहरको लागि खेल्दै थिए जुन १ 1988 2006 देखि २०० 1988 सम्म फैलिएको थियो (जुन वर्ष उनका छोराले युवावस्थाको क्यारियर शुरू गरे)। पैट्रिक Kwame १ en 1991 देखि १ XNUMX XNUMX १ बीच बीच आर्सेनलका लागि चित्रित।
क्लब फुटबलबाट सेवानिवृत्ति पछि, क्वामे आम्पाडु क्लबको कोचिंग पोशाकको एक भाग बन्न एक्सेटरमा फर्किए। यो त्यस्तो समय हो जब उनले आफ्नो छोरा एथान एम्पाडूलाई क्लबसँगै आफ्नो क्यारियर सुरु गर्न प्रेरित गरे। आइरिसम्यान पछि २०१२ मा आर्सेनलमा बसाई सरे र उनी क्लबको अण्डर १ 2012 र अण्डर १ 14 कोच भए।
लेखन को समयमा, इथान हाल ए AS मोनाको सहायक प्रबन्धक हो जुन वर्तमान एएन मोनाको प्रबन्धक र आर्सेनल लेजेंन्ड संग काम गर्दछ। थियरिरी हेनरी। तल दुवै प्रबन्धकहरूको तस्बिर हो।
Ethan Ampadu को उत्पत्ति - तथ्यहरू सही पाउँदै:
एथानको बुवाको नाम प्याट्रिक क्वामे अंपाडू हो जुन प्रख्यात घानाको प्रसिद्ध र उच्च जीवन कलाकारको लागि मिल्दोजुल्दो छ जसलाई पैट्रिक क्वामे आम्पाडू पनि भनिन्छ। धेरैलाई विश्वास छ 800०० भन्दा बढी रेकर्डको साथ घानियन हाईलाइफ कलाकार ईथानका बुबाको छोरो हो।
आधुनिक घाना अनलाइन मिडियाको कोबी किंग्स द्वारा रिपोर्ट गरिएको गलत जानकारीको विपरित, प्रसिद्ध उच्च जीवन संगीतकार एथान एम्पाडूका हजुरबुबा वा बुवा होइनन्।
इथान एम्पपadu बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य तथ्य- अनियमित तथ्यहरू
उनको उपनाम को बारे मा:
ईथानलाई उनका प्ले साथीहरू र फ्यानहरूले उपनाम दिएका छन् "अर्को डेभीड लुइज“। यो उनको पूर्ण रूपमा बढेको डर कपालको कारणले हो जसले डेभिड लुइज उपस्थितिको वर्णन गर्दछ। दुबै lookalike फुटबलर फुटबल एक "को रूप मा बुझ्दछन्सामूहिक खेल"र उनीहरूको ब्रमान्स केही खास चीज हो।
4 देशहरूको लागि प्ले गर्नको लागि योग्य:
इथन एम्पपadu को भाग्यशाली फुटबलर को केहि को रूप मा एक रेकर्ड छ जसलाई खुला तरिकाले4देशों को लागि निमंत्रण को लागि आमंत्रण प्राप्त गरेको छ; घाना, आयरल्याण्ड, इङ्गल्याण्ड र वेल्स।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो इथन एम्पपadu बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाईले केहि राम्रो देख्नुहुन्न भने, कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी तपाईका विचारहरुलाई सँधै मूल्य दिन्छौं र सम्मान गर्छौं।